Ogaden News Agency (ONA) – Dawlada Ingiriiska oo Joojisay Deeqdii ay Itoobiya Siin Jirtay.
Dawlada Ingiriiska oo Joojisay Deeqdii ay Itoobiya Siin Jirtay.
Dawlada Ingiriiska ayaa sheeca ka qaaday ineey joojinayso deeqdii banii’aadminimo ay siin jirtay Gumaysiga Itoobiya. Talaabadan ay dawlada Ingiriisku qaaday ayaa salka ku haysa kadib markay soo shaac bexeen cadaymo badan oo muujinaya sida Gumaysiga Itoobiya u musuqay deeqdii lasiiyay loona adeegsaday arimo militari.
Ingiriiska ayaa sheegay ineey joojinayaan lacag u dhigan £27 Milyan oo ah lacagta Istarliinta layidhaahdo ee wadanka Ingiriiska. Eedaymaha loo cuskaday in deeqdaas lagu joojiyo ayaa waxaa kamid ah Kufsi, Jidh-dil, iyo xasuuq shacabka loogu gaystay.
Hay’daha caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha u dooda ayaa warbixino ay soo saareen ku sheegay in taliska Itoobiya uu falal ka dhan ah xuquuqul inkaanka ku kacay. Meelaha dhibaatooyinka ugu badan ay ka dheceen waxaa kamid ah wadanka Ogadenya. Kooxda Hawaarinta ayaa kamid ahaa maxaysata lagu maalin galin jiray lacagtii deeq ahaanta Gumaysiga Itoobiya ay beesha caalamku ugu deeqeen balse loo adeegsaday in shacabka dulman ee Somalida Itoobiya lagu dhibaateeyo.